Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Toki Air dia nanatevin-daharana an'i Sabre: A new Tokyo original
Airlines • Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety!
Radixx, orinasa Saber ary mpamatsy rindrambaiko mpaninjara zotram-piaramanidina lehibe, dia nanambara androany fa nanao fifanarahana ho an'ny vokatra Radixx feno miaraka amin'ny TOKI AIR, orinasam-pitaterana sarany ambany monina ao Niigata, seranan-tsambon'i Japana, ny orinasa. TOKI AIR dia hifantoka voalohany amin'ny tetikady amin'ny tsenan'ny fialam-boly isam-paritra miaraka amin'ny sidina miainga avy ao amin'ny seranam-piaramanidina Niigata mankany amin'ireo toerana lehibe ao an-toerana ao Japana.
TOKI AIR dia nisafidy Radixx ho mpiara-miombon'antoka amin'ny teknolojia noho ny fisiany ao Japana ary koa ny fahafahany mifanaraka amin'ny fandaharam-potoanan'ny zotram-piaramanidina. Ao anatin'ny fiaraha-miasa, ny TOKI AIR dia hanararaotra ny vokatra Radixx feno ao anatin'izany ny Radixx ezyCommerce, Radixx Res, Radixx Go, Radixx Go Touch, ary Radixx Insight. Ny fananganana ny suite feno dia ahafahan'ny zotram-piaramanidina manomboka ny varotra miaraka amin'ny vahaolana maoderina indrindra ary mitondra fahombiazana hatrany am-piandohana.
"Nahavariana anay ny tsirairay tamin'ireo demo vokatra hitanay momba ny fotoana famaliana sy ny dingana mandeha ho azy izay hanampy amin'ny fametrahana ny asan'ny fiaramanidina," hoy izy. Masaki Hasegawa, talen'ny solontena, TOKI AIR. “Mankasitraka ny ekipan'i Saber sy Radixx izahay tamin'ny fanoloran-tenany hanatanteraka ny fotoana fampiharana. Mino izahay fa ny dian-tongotr'izy ireo any Japon miaraka amin'ny haben'ny vokatra dia nahafahan'izy ireo nanangana lalana mampientam-po miaraka amin'i Saber sy ny vokatra Radixx ho mpiara-miasa aminay amin'ny teknolojia.
Mba hampisehoana ny tolotra e-varotra, ny TOKI AIR dia hampiasa ny motera famandrihana amin'ny Internet Radixx ezyCommerce ao anatin'izany ny Portal Agency Travel tafiditra tanteraka izay hampiasain'ny masoivoho fitsangatsanganana eo an-toerana. TOKI AIR dia hihazona fanaraha-maso avo lenta amin'ny marika an-tserasera sy ny tolotra amin'ny fampiasana ny Radixx ezyCommerce Content Management System.
TOKI AIR dia handeha mivantana amin'ny rafitra serivisy mpandeha Radixx Res natao hanatsarana ny paikady sy ny fiovam-pivarotana varotra, miaraka amin'ny fivarotana antsinjarany ao anatin'ny fotony, ahafahan'ny fitantanana ivon'ny sidina sy ny serivisy misy vidiny. Io lojika afovoany io no ahafahan'ny zotram-piaramanidina mametraka haingana ny saran-dalana sy ny tolotra fanampiny ary koa ny automatique ny fizotran'ny fahombiazana. Ny interface maoderina sy intuitive dia manohana ny filan'izy ireo amin'ny tarehin-tsoratra roa-byte, manatsara ny traikefan'ny mpiasa.
Ny serivisy fiaingana Radixx Go sy ny vahaolana finday Radixx Go Touch dia ahafahan'ny TOKI AIR mampivoatra ny asa fisavana fidirana ao amin'ny seranam-piaramanidina ary manitatra mora foana ny fahafaha-manao mandritra ny vanim-potoana faran'izay betsaka amin'ny alàlan'ny mpivezivezy. Miaraka, ny biraon'ny serivisy fiaingana sy ny vahaolana finday dia hanampy amin'ny famoronana traikefa amin'ny seranam-piaramanidina mahomby ho an'ny mpandeha.
TOKI AIR dia hampiasa ny fitaovan'ny tatitra sy ny analyse Radixx Insight mba handraisana fanapahan-kevitra ara-barotra haingana sy manan-danja amin'ny fotoana tena izy.
"Faly izahay manitatra bebe kokoa ny fiaraha-miasa manan-danja ao Japana ary miarahaba ny TOKI AIR amin'ny vondrom-piarahamonina Saber sy Radixx," hoy izy. Chris Collins, filoha lefitra zokiolona sy tale jeneralin'ny Radixx. "Faly izahay manome ny teknolojian'ny indostrian'izy ireo ary manolo-tena lalina amin'ny fanamorana ny fampiharana tsy misy olana ary handeha mivantana ho an'ny zotram-piaramanidina misy azy ireo."
Miaraka, ny sehatra fitsangatsanganana matanjaka an'i Saber sy Radixx dia hanome ny zotram-piaramanidina toeram-pivarotana tokana amin'ny tolotra sy ny fitantanana ny kaomandy amin'ny alàlan'ny fanatanterahana sy ny asa aorian'ny sidina.
TOKI AIR dia nanao fitiliana sidina avy any Tokyo Narita mankany amin'ny seranam-piaramanidina Sado tamin'ny 24 Mey 2021. TOKI AIR dia mikasa ny hanomboka ny varotra amin'ny martsa 2022 ary hanomboka ny sidina amin'ny tapaky ny taona 2022. Ny zotram-piaramanidina koa dia mikasa ny hanitatra ny orinasany entana miaraka amin'ny ATR Cargo Flex fiaramanidina.
Momba ny Saber Corporation
Saber Corporation dia orinasa lozisialy sy teknolojia malaza izay manatanjaka ny indostrian'ny fitsangatsanganana eran-tany, manompo orinasa fitsangatsanganana isan-karazany ao anatin'izany ny zotram-piaramanidina, hotely, masoivoho fitsangatsanganana ary mpamatsy hafa. Ny orinasa dia manome vahaolana amin'ny varotra, fizarana ary fanatanterahana izay manampy ny mpanjifany hiasa amin'ny fomba mahomby kokoa, mitondra fidiram-bola ary manolotra traikefa amin'ny mpandeha manokana. Amin'ny alàlan'ny tsenan'ny diany lehibe indrindra, i Saber dia mampifandray ireo mpamatsy fitsangatsanganana amin'ireo mpividy manerana an'izao tontolo izao. Ny sehatry ny teknolojian'i Sabre dia mitantana mihoatra ny $260B mitentina $160B isan-taona. Ny foibeny any Southlake, Texas, Etazonia, dia manompo mpanjifa any amin'ny firenena XNUMX mahery manerana izao tontolo izao i Saber. Raha mila fanazavana fanampiny tsidiho www.sabre.com.
Momba an'i Radixx
Niorina tamin'ny 1993, Radixx, manana foibe any Orlando, Florida, dia manambatra fomba fiasa ara-teknolojia vaovao miaraka amin'ny modely fiaraha-miasa tokana ahafahan'ny zotram-piaramanidina amin'ny habe rehetra sy ny maodely fandraharahana ho mpivarotra mahomby sy mpandraharaha mahomby. Radixx dia mikarakara ny zotram-piaramanidina LCC sy ULCC, anisan'izany ny fanohanana ny fizarana GDS. Radixx dia manolotra motera famandrihana amin'ny Internet kilasy manerantany, Radixx ezyCommerce ™, rafitra serivisy mpandeha mifototra amin'ny rahona, Radixx Res ™, ary Suite Departure Services, Radixx Go ™, natao manokana mba ahafahan'ny zotram-piaramanidina hampitombo ny tombom-barotra sy hampitombo ny vokatra amin'ny alàlan'ny fanitarana ny serivisy fitsinjarana. Nanomboka tamin'ny taona 2016, Radixx dia nanolotra ny rafitra serivisy mpandeha an'ny taranaka fahenina, micro-services. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Radixx, tsidiho azafady www.radixx.com.
Niorina tamin'ny taona 2020, TOKI AIR dia mpitatitra sarany ambany naorin'ny Antenimieran'ny Varotra Niigata sy ny Fikambanan'ny Mpanatanteraka Orinasa Niigata. Ny zotram-piaramanidina vaovao dia antenaina hampiasa fiaramanidina ATR mankany amin'ny lalana manintona toa ny faritra Kansai, Nagoya, Sendai, ary Sapporo. TOKI AIR dia mikasa ny hanomboka ny asany amin'ny 2022. Ary ny TOKI AIR dia manomana lalana vaovao mampifandray ny nosy SADO sy Tokyo.